DMP Kubatanidzwa: Dhata-Inotungamirwa Bhizinesi Yevaparidzi | Martech Zone
Iko kudzikisira kwakanyanya mukuwanikwa kweyechitatu-bato dhata kunoreva mashoma mikana yekuita hunhu uye kudonhedza mari yekushambadzira kune vazhinji varidzi venhau. Kugadzirisa kurasikirwa, vaparidzi vanofanirwa kufunga nezvenzira nyowani dzekusvikira data remushandisi. Kuhaya iyo data manejimendi chikuva inogona kuve nzira yekubuda.
Mukati memakore maviri anotevera, musika wekushambadzira uchaburitsa makuki-echitatu-bato, ayo anozoshandura echinyakare modhi yekutarisa vashandisi, kugadzirisa nzvimbo dzevashambadziro, uye mishandirapamwe yekutevera.
Pawebhu, mugove wevashandisi wakatarwa kuburikidza neyechitatu-bato makuki anozoenda kune zero. Iyo yechinyakare modhi yekuyambuka-saiti browser yekutsvagisa neyechitatu-bato data vanopa uye vatengesi zvakare ichazopera. Nekudaro, kukosha kweyekutanga-bato dhata kuchakwira. Vaparidzi vasina yavo pachavo yekuunganidza data vanogona kusangana nezvipingamupinyi zvakakura, nepo mabhizinesi anotora zvikamu zvavo zvevashandisi vari munzvimbo yakasarudzika yekuwana mibairo yenzvimbo nyowani yekushambadzira.
Kuunganidza nekutarisira yekutanga-bato dhata kunogadzira yakasarudzika mikana kune vaparidzi mukusimudzira yavo mari, kuvandudza zvemukati ruzivo, kuita, uye kuvaka yakatendeka inotevera. Kugadziridza dhata-rebato rekutanga kunogona kushandiswa kugadziridza zvemukati uye kugadzirisa mameseji ekushambadzira ekukurudzira-mawebhusaiti.
Bhizinesi Insider inoshandisa hunhu hwekuita kuti ivandudze ma profiles evaverengi vayo uye vozoshandisa iyo ruzivo kuita tsamba dzetsamba dzeemail uye onsite zvemukati zvemukati kurudziro yekuita zviri nani kuverenga vaverengi. Aya maitiro akawedzera kushambadzira kwavo-kuburikidza nemitengo ne60% uye vakawedzera mitengo yekudzvanya mumatsamba avo eemail ne150%.
Nei Vaparidzi Vachida DMP
Maererano ne Admixer zvemukati manhamba, paavhareji, 12% yemabhajeti ekushambadzira anoshandiswa pakutora data-rebato rekutanga kune vateereri vachinangisa. Nekubviswa kwechetatu-bato makuki, kudiwa kwedata kunowedzera zvakanyanya, uye vaparidzi vanotora data-rebato rekutanga vari munzvimbo yakanaka yekubatsirwa.
Asi, ivo vachazoda yakavimbika dhata manejimendi manejimendi (DMP) yekushandisa dhizaini-inotungamirwa bhizinesi modhi DMP ichavatendera kuti vapinze nemazvo, kutumira kunze, kuongorora, uye, pakupedzisira, kuita mari iyo data. Yekutanga-bato data inogona kusimbisa iyo yekushambadzira uye nekupa imwe yekuwedzera sosi yemari.
DMP Shandisa Kesi: Simpals
Simpals ndiyo yakakura kwazvo pamhepo midhiya imba muMoldova. Mukutsvaga kwenzvimbo nyowani dzemari dzinovimbika, ivo yakabatana neDMP kumisikidza yekutanga-pati yekuunganidza data uye mushandisi analytics ye999.md, iyo Moldavian e-commerce chikuva. Nekuda kweizvozvo, ivo vakatsanangura mazana mashanu evateereri zvikamu uye izvozvi vanozvitengesa zvakarongeka kune vanoshambadzira kuburikidza neDMP.
Kushandisa DMP kunopa mamwe madhata edhata evashambadziri, uku uchisimudzira mhando neCPM yezvakaratidzwa. Dhata ndiyo ndarama nyowani. Ngatitarisei chinhu chikuru chekuronga data revaparidzi uye kusarudza tech inopa iyo inogona kukodzera bhizinesi zvinodiwa zvemarudzi akasiyana evaparidzi.
Nzira yekugadzirira DMP Kubatanidzwa?
Data data - Chekutanga uye chakakosha, vaparidzi vanofanirwa kuongorora zvine hungwaru kuunganidzwa kwedatha pamapuratifomu avo. Izvi zvinosanganisira kunyoreswa pamawebhusaiti uye mune nharembozha, kusaina-mukati mumasaiti eWi-Fi, uye chero zviitiko apo vashandisi vanokurudzirwa kuti vasiye iyo yega data. Zvisinei nekuti iyo data rinobva kupi, kuunganidzwa kwayo uye kuchengetedza kunofanirwa kutevedzera marongero emutemo aripo e GDPR uye CCPA. Nguva dzese vaparidzi pavanounganidza ruzivo rwevanhu, ivo vanofanirwa kuwana mvumo yevashandisi, uye vovasiya vaine mukana wekusarudza kubuda.
Kugadziriswa kwedata - Usati wakwira DMP, iwe unofanirwa kugadzirisa zvese data rako, wozviyananisa kuita imwe fomati, uye kubvisa zvakapetwa. Kuti ugadzire yunifomu fomati yedata, zvakakosha kuti usarudze yakasarudzika yakasarudzika chitarisiko, zvinoenderana nezvamunogadzira dhatabhesi rako. Sarudza iyo inogona nyore kuona mushandisi, senhamba yefoni kana email. Izvo zvakare zvakarerutsa kusangana kana iwe ukakamura dhata rako muzvikamu maererano nevateereri vanoita zvakanaka.
Maitiro ekubatanidza DMP?
Imwe yedzakanakisa nzira yekubatanidza DMP ndeye isanganise neCRM kuburikidza neAPI, kubvumirana UniqueIDs. Kana CRM yako ichibatanidzwa nezvose zvako zvemadhijitari, inogona kupfuudza data kuDMP, iyo inogona kuipfumisa nekuisimudzira.
DMP haichengetedze ruzivo rwevashandisi pachavo. Kana DMP ichibatanidzwa kuburikidza neAPI kana faira rekunze, inogamuchira svinga re data rinobatanidza ID yemuparidzi neyeakasarudzika mushandisi chitupa chawakatsanangura mudanho rekutanga.
Kana zviri zvekubatanidzwa kuburikidza neCRM, unogona kuendesa data mune iyo hashed fomati. DMP haigone kusarudza iyi data, uye ichaibata mune ino yakavharidzirwa fomati. DMP inovimbisa kuvanzika uye chengetedzo yemushandisi data, chero bedzi waita zvakakwana kusazivikanwa uye kunyorera.
Ndeapi mashandiro anofanira DMP kuve nawo?
Kuti usarudze yakanakisa DMP kune rako bhizinesi, iwe unofanirwa kutsanangura zvaunoda kune iyo tech mupi. Kunyanya kukosha, iwe unofanirwa kunyora ese anodikanwa ehunyanzvi kusangana.
DMP haifanire kukanganisa maitiro ako uye inoda kushanda yakatenderedza huripo hunyanzvi hwekuvaka. Semuenzaniso, kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinayo CRM chikuva, CMS, uye kusanganiswa nevanoda vanobatirana, iyo yakasarudzwa DMP inofanirwa kuenderana navo vese.
Paunenge uchisarudza DMP, funga nezvese aripo ehunyanzvi hunyanzvi, kuti kusangana kusazove mutoro kuchikwata chako chehunyanzvi. Iwe unoda chikuva icho chinonyatso kuendesa makiyi mashandiro: kuunganidzwa, kuseketwa, kuongorora, uye kuita mari yedata.
Tag Manager - Mushure mekunge iwe wabatanidza yako iripo data muDMP yako, iwe uchafanirwa kutora mamwe madhata data. Kuti uite izvozvo, unofanirwa kuseta ma tag kana mapikisheni pane ako mawebhusaiti. Idzi ndidzo tambo dzekodhi dzinotora data nezvehunhu hwevashandisi pamapuratifomu ako uye wozozvinyora muDMP. Kana iyo yekupedzisira iine tag maneja, ichakwanisa kubata ma tag pamapuratifomu ako epakati. Kunyangwe uchida, ichaponesa yako tech timu nguva yakawanda uye nesimba.
Chikamu uye Mutero - Yako DMP inofanirwa kuve neakasiyana maficha ekuparadzaniswa kwedata uye kuongorora. Iyo inofanirwa kukwanisa kumisikidza taxonomy, iyo semuti-senge dhizaini dhizaini iyo inotsanangura kuwirirana pakati pezvikamu zvako zvedata. Izvo zvaizobvumidza DMP kutsanangura kunyangwe zvidimbu zvidimbu zve data, zviongorore zvakadzama, uye zvivaise pamusoro.
CMS kusangana - Chimwe chikamu chepamusoro-soro cheDMP kugona kuchisanganisa pamwe newebsite yako CMS. Izvo zvinokutendera iwe kuti mushandise kugadzirisa zvemukati pane yako webhusaiti uye kusangana nezvinodiwa zvevashandisi vako.
Mari - Mushure mekunge iwe wabatanidza DMP, iwe unozofanirwa kudzidza kumisikidza iyo data yeiyo yekuwedzera monetization mune anodiwa mativi mapuratifomu (DSP). Izvo zvakakosha kuti usarudze DMP iyo inogona kuve nyore kubatanidzwa neako ekuda shamwari.
Mamwe maDSP anopa DMP yemuno, yakanyatsobatanidzwa mune yavo ecosystem. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti DMP yakabatanidzwa mune imwechete DSP inogona kuve mhinduro inoshanda, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu mumusika wako uye nemakwikwi mamiriro.
Kana iwe ukashanda mumusika mudiki, uko imwe DSP iri mutambi anotungamira, kushandisa yavo yemuno DMP inogona kunge iri smart kufamba. Kana iwe ukashanda mumusika muhombe, iwe unofanirwa kutarisisa kuti nyore sei iyo DMP inogona kusangana neakakura ekuda mapuratifomu.
Ad server kubatanidzwa - Chimwe chinhu chakakosha kugona kushandisa yako data. Vazhinji vaparidzi vanoshandisa dura reshambadziro kushanda zvakanangana nema agency nevashambadzi, kuvhura yavo mishandirapamwe yekushambadzira, kusimudzira-kusimudzira, kana kutengesa inosara traffic. Nekudaro, yako DMP inoda kusangana zviri nyore neyako ad server.
Sezvineiwo, yako ad server inofanirwa kubata zvinhu zveshambadziro pane ako ese mapuratifomu (webhusaiti, nharembozha, nezvimwewo) uye nekuchinjana iyo data neCRM yako, iyo inozoikurukura neDMP. Mhando yakadai inogona kurerutsa kese kubatanidza kwako kushambadziro, uye ikuregedze zvakajeka kutevedzera mari. Nekudaro, izvi hazviwanzo kuitika, uye unofanirwa kuona kuti DMP inoshanda mushe pamwe neyako ad server.
Izvo zvakakosha kuti mupi wezve tekinoroji iwe waunosarudza atevedzere neyakavanzika pasirese uye nemitemo yekuchengetedza data Kunyangwe iwe ukaisa pfungwa chete pane data kubva kumusika wemuno, unogona kuwana vashandisi kubva kune chero chikamu chenyika.
Chimwe chinhu chakakosha kufunga nezvacho hukama hweye DMP mupi nevashambadzi vemuno nevadikani. Kubatana neyakavakirwa zvivakwa pamwe neyakagadzwa kudyidzana kunogona kurerutsa kubatanidzwa kwemapuratifomu ako uye kugadzirisa kuita monetization kwezvinhu zvako zvemagetsi
Izvo zvakare zvakakosha kuti usarudze tekinoroji mudiwa uyo kwete chete kuti anokupa iwe zvizere-yekuzvishandira-yega interface asiwo inokupa iwe neinoshanda nhungamiro, mhinduro, uye kubvunza. Wepamusoro-notch kuchengetedzwa kwevatengi ndiko kunofanirwa kugadzirisa chero nyaya uye kugadzirisa ako maratidziro ekutonga kwedata.
Tags: admixeradtechkuyambuka-saiti kubhurawuzamutengi wehutano hwehukamakuunganidzwa kwedatazvine simba zvemukati optimizationyekutanga-pati datakuita marimaemail maemailtarisataxonomyyechitatu-bato dhata